November 13, 2021 N88LeaveaComment on धुलाम्य बन्यो जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक, स्वास्थ्यमा समस्या
काठमाडौँ । जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक विस्तार सुरु भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसक्दा धुलोले स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा समस्या हुन थालेको छ । काम सुरु गरेको छ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसक्दा हिउँदमा धुलोले त्यस क्षेत्रको वायु प्रदूषण हुने गरेको छ । निर्माण भइरहेको धुलाम्य सडकमा निर्माण व्यवसायीले पानी पनि हाल्दैनन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ चौतारा खरिबोटकी […]
राम्रो काम गरिरहेकी रामकुमारी झाँक्रीलाई लाग्यो झड्का: निर्णय नमान्ने घोषणा !
November 13, 2021 N88LeaveaComment on राम्रो काम गरिरहेकी रामकुमारी झाँक्रीलाई लाग्यो झड्का: निर्णय नमान्ने घोषणा !
काठमाडौँ । नेकपा एसबाट शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी चर्चित युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई ठूलो झड्का लाग्ने अवस्था सृजना भएको छ । उनले मन्त्रालयको जिम्मा पाए लगत्तै जनाताको मन जिन्ने राम्रो कदम चाल्दै आईरहेकी थिइन् । नेकपा एमालेमा केपी ओलीको चर्को बिरो ध गर्दै पार्टी छा’डेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेकी मन्त्री झाँक्री […]
November 13, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्ड अस्पताल भर्ना, एक्कासी के भयाे ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्पताल भर्ना भएका छन् । रक्तचाप बढेपछि उनी ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् । प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालका अनुसार कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरको विभिन्न कार्यक्रमहरुमा निरन्तर सहभागिता जनाउने क्रममा भएको धपेडी र चापका कारण प्रचण्डलाई रक्तचाप बढ्न गएको हो । […]
मुखबाट दुर्गन्ध आउने समस्या छ ? अपनानुस यी घरेलु उपाय
November 13, 2021 N88LeaveaComment on मुखबाट दुर्गन्ध आउने समस्या छ ? अपनानुस यी घरेलु उपाय
जब हामी बिहान उठ्छौं, जब हामी ब्रश गर्दैनौं तब मुखबाट दुर्गन्ध आउँछ। कुल्ला नगरी सास दुर्गन्धित हुनु सामान्य कुरा हो, तर त्यहाँ केहि मानिसहरु छन् जसको मुखबाट सधैं दुर्गन्ध आउँछ। ब्रश गरेपछि पनि उसको मुखबाट गन्ध आउन छोड्दैछ । यस्तो स्थितिमा, केहि सुझावहरु पछ्याउन सकिन्छ, ताकि मुख बाट गन्ध आउँदैन। टिप्स हरियो चियामा जीवाणुरोधी तत्व […]
November 13, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् बच्चाका लागि स्वस्थ खाजा
व्यस्त जीवनशैली र जंक फुडको प्रयोगले आजकल सबैतिर सताएको छ । आजभोलि घरमा बनाएका खानेकुरा भन्दा प्याकेटकै खानेकुरामा खुशी हुन्छन् बालबालिका । अभिभावकलाई पनि त्यही सजिलो । पैसा दियो पसल पठायो । स्वास्थ्यको चिन्ता कसैलाई छैन । बिहानै बच्चाहरुलाई के खाजा राखेर स्कुल पठाउने अभिभावकलाई सबैभन्दा झन्झट हुन्छ । त्यसैले धेरै अभिभावकले पैसा दिएर पठाउने […]
राति निद्रा लाग्दैन, अपनाउनुस् यी १८ उपायहरु
November 13, 2021 N88LeaveaComment on राति निद्रा लाग्दैन, अपनाउनुस् यी १८ उपायहरु
जो मानिसहरु रातमा केवल ५ ६ घण्टा मात्र सुत्दछन् उनीहरुमा मुटुरोग, हृदयाघात, मधुमेह तथा बाथ जस्ता खतरनाक रोगको खतरा बढ्दछ । पर्याप्त निद्रा नपर्नु विभिन्न खाले रोगको कारक बन्ने अनुसन्धानहरुले बताएको छ । विज्ञानको अनुसन्धानले पनि यस्तै बताएको छ दिनभरको भागदौड, तनाव तथा धेरै कामका कारण निद्रा नपाइरहेका छन् । धनका धनीहरु अहिले निद्रा किनेर […]
यी हुन् घुस्याहा सुब्बा: १ अर्ब ५० करोडको सम्पति ! (प्रमाणसहित)
November 13, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् घुस्याहा सुब्बा: १ अर्ब ५० करोडको सम्पति ! (प्रमाणसहित)
काठमाडौं । सरकारी जागिरको २९ वर्षकै अवधिमा एकजना नायब सुब्बा (नासु)ले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मालपोत कार्यालय सिमराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख मदनप्रसाद गुप्ताले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा करोडौंको सम्पत्ति जोडेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ। उनले कमाएको अकुत सम्पत्ति गुप्ताले आफ्नो श्रीमती रीतादेवी¸ छोराहरु विक्की गुप्ता र रकी गुप्ता, अन्य व्यक्तिहरु […]
यी हुन् कलेजो सफा पार्ने ११ खानेकुरा, नियमित खानुस् निराेगी बन्नुस्
November 13, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् कलेजो सफा पार्ने ११ खानेकुरा, नियमित खानुस् निराेगी बन्नुस्
एजेन्सी । शरीरको फरक–फरक अंगलाई फरक–फरक पोषक तत्व चाहिन्छ । कलेजो पनि हाम्रो शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । यदि यसलाई तन्दुरुस्त बनाउन चाहनु हुन्छ भने खानुहोस् यि खानेकुरा । प्याज– प्याजमा लिभर इन्जाइमलाई सक्रिय बनाउने क्षमता हुन्छ, जसले शरीरमा भएका विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ । यसमा अधिकमात्रामा हुने अलाइसिन र सेलेनियम नामक दुईवटा […]
यी राशि भएका व्यक्तीलाई छान्नुहोस जीवनसाथी, धेरै भाग्यशाली हुन्छन्
November 13, 2021 N88LeaveaComment on यी राशि भएका व्यक्तीलाई छान्नुहोस जीवनसाथी, धेरै भाग्यशाली हुन्छन्
एजेन्सी । हाम्रो आसपास केही यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् , जसले आफ्नो जीवनको मुस्किल भन्दा मुस्किल परिस्थिति पनि हल गर्छन् | यिनीहरुलाई देखेर मनमा यो कुरा आउन सक्छ कि यिनीहरुमा त्यस्तो के गुण छ त ? ज्योतिषशास्त्रका अनुसार केही राशिका व्यक्तिहरु हुन्छन् जसको भाग्य निकै बलियो हुन्छ | यतिमात्र होइन यिनीहरुको भाग्यको असर उनीहरुको जीवनसाथीमा […]
ग्याष्टिकका कारण पेट फुल्ने समस्या छ ? घरमै पाइने यी चिजहरूले तुरुन्त दिन्छ राहत
November 13, 2021 N88LeaveaComment on ग्याष्टिकका कारण पेट फुल्ने समस्या छ ? घरमै पाइने यी चिजहरूले तुरुन्त दिन्छ राहत
एजेन्सी । ग्याष्टिकको समस्या हुनेको पेट फुल्नु सामान्य हो । धेरै व्यक्तिहरूमा यो समस्या अक्सर हुन्छन्, जसको कारण उनीहरुलाई यो चिन्ताको बिषय बन्दछ । जब हामी खाना खान्छौं, हाम्रो पेटमा एसिडले तिनीहरूलाई एकदमै टुक्रा टुक्रा पार्दछ। पाचनको यस प्रक्रियाको दौरान, पेटबाट ग्यास बाहिर आउँछ जिसके कारण कहिलेकाँहि सुन्निन्छ र पेट दुख्छ। ग्याष्टिक हुनुको केही कारण […]